Adanwomase - Wikipedia
Adanwomase yε kuro a εwɔ Kwabre Atɔeε Mansini mu wɔ Asante Mantam mu. Kuro yi yε kwansin bεyε 17 firi Kumase. Adanwomase di akotene se yεreka nkuro a wonwene Kente te sε Bonwire ne Sakora Wonoo. Adanwoamse yε kwansini mmienu firi Bonwire. Saa Kuro yi so nso na Adanwomase Ntoaso Sukuu wɔ. 
Wɔ afe 1697, the Asantehene paa n'ahenfo no mu baako a na ɔyε Akyεmpenhene sε ɔnyi nipa firi Adanwomase, Asotwe, Bonwire, ne Wonoo wɔnkɔ Botuku kuro ketewa bi a εben Abigyan na wɔnkɔ sua ntomasinii nwene.Wɔn baa wɔn nkyi no womaa wɔn nsaasawa sε wɔnfa nwene paatan bi a wɔkyerε wɔn no.Saa paatan wei no na ɔferε no Sesea no wei ne ntoma a εdi kan a wɔn nwenee maa Asantehene. Saa sesea εbi si nε εda wɔ Adanwomase.
Fitii berε a wɔn a wɔkɔɔ Bontuku baa no, Adanowmase bεyεε adehye kuro se εba no Kente nwono a. Saa nkurofo fitti bεnewne kente maa Asantehene. Akyiri no wɔhyεε aseε nwene kente yi wɔ ahasuo ahodoɔ bebree mu maa wɔn nnafonom ne wɔn abususfo. Wei na maa kente behyetaa mmea bebree so.
Teodora yεkyerε a εkyerε of obi a ɔnwene Akan Kente wɔ Adanwomase .
Retrieved from "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Adanwomase&oldid=18853"
This page was last edited on 26 March 2019, at 13:00.